कृष्णको हात जोड्ने सपना मुम्बईमा साकार हुँदै – Dainik Pana
Posted on August 7, 2019 August 8, 2019 Author Dainik Pana Comment(0)
कृष्ण ओलीको दुवै नयाँ हात हाल्न मुम्बईमा छन् । उनीहरु साउनको पहिलो हप्तातिर मुम्बई पुगेका थिए । कृष्ण आफ्ना नयाँ हात जोड्ने प्रक्रियामै छन् ।
खुट्टा जोडिसकेका कृष्णका हात पनि अब चांडै जोडिने भएका छन् । अब नयाँ हात जोड्ने कृष्णको बर्षौ देखिको सपना साकार हुँदैछ । उनले मुम्बईबाटै आफ्नो फोटो पोष्ट गर्दै अब छिट्टै हात जोड्ने सपना साकार हुँदै गरेको संकेत दिएका छन् । उक्त फोटोको ब्यागराउण्डमा नक्कली हात र सक्कली हातको फ्रेन्डसिप प्रतीकात्मक भाव बोकेको फोटो आफ्नो फेसबुक मार्फत पोष्ट गरेका छन् ।
मन्द मुस्कान पस्किएको फोटोको क्याप्सनमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अर्थात क्याप्सन रहित फोटो पोस्टिएका छन् । लाग्छ अब उनि जोडिएका सक्ला हात बोकेर छिट्टै नेपाल फर्किनेछन ।
कृष्णको हात जोड्न मुम्बई भैरहेको बेला उनका शुभचिन्तकहरुले सु-स्वस्थ एबम सफलताको शुभकामना दिइ रहेका छन् ।
Posted on August 5, 2019 Author Dainik Pana
बच्चालाई आपसमा झगडा गर्न छुट दिने कि ?
घरमा बालबच्चा आपसमा झगडा गर्छन् । दाजु-भाई, दिदी-बहिनीबीच सानोतिनो कुरामा मनमुटाव हुन्छ । उनीहरु एकअर्कासँग झगडा गर्छन् । कुटाकुट गर्छन् । रुन्छन् । घुक्र्याउँछन् । त्यसपछि ? त्यसपछि उनीहरु आफै सम्हालिन्छन् । कसैले फकाउन पर्दैन, कसैले फुल्याउनु पर्दैन । आफै सम्हालिन्छन् । पुन उनीहरु एकअर्कासँग बोल्छन् । घुलमिल हुन्छन् । खेल्न थाल्छन् । रमाउन थाल्छन् […]